Suuriya oo Israa’iil ku eedaysay weerrarkii saldhiggeeda cirka – Radio Muqdisho
Suuriya oo Israa’iil ku eedaysay weerrarkii saldhiggeeda cirka
Dowladaha Ruushka iyo Suuriya ayaa waxa ay Israa’iil ku eedeeyeen in xalay weerrartay garoon diyaaradeed oo uu leeyahay milateriga Suuriya halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 14 qof.
Weerrarkii Isniinta ayaa waxaa lagu bartilmaameedsaday saldhigga ciidammada cirka ee Tiyas kaas oo sidoo kale loo yaqaan T4, kaas oo ku yaal meel u dhaw magaalada Xums.
Israa’iil oo horay u weerraro ugu qaadday bartilmaameedyo ku yaal Suuriya ayaanan weli wax war ah arrintan ka soo saarin.
Dhacdada ayaa imanaysa iyadoo caalamku la fajacay weerrar la sheegay in loo adeegsaday hubka kiimikada oo lagu qaaday magaalo ku taal Suuriya oo ay fallaagadu gacanta ku hayaan.
Mareykanka iyo Faransiiska ayaa waxa ay ku goodiyeen inay jawaab ka bixin doonaan weerrarka kiimikada ah ee la sheegay in lagu qaaday magaalada Douma, ee gobolka Bariga Ghouta, ee u dhaw magaalada caasimadda ah ee Dimishiq.
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in arrintaasi “laga shaleyn doono” sidoo kale waxa uu Madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Assad uu ku tilmaamay inuu yahay “xoolo”.
Dhanka kale dagaalyahannadii ugu dambeeyay ee ku sugnaa magaalada Douma ayaa isa soo dhiibay waxaana basas looga qaaday deegaankaasi la go’doomiyay kaddib markii ay heshiis la galeen dowladda, sida lagu baahiyay TV-ga qaranka Suuriya.
Munaasabad Casho sharaf oo lagu soo dhawanyay Cabdi Bile Cabdi ayaa lagu qabtay Muqdisho